ỌRỤ NTANETỊ ONYE ỌRỤ NA-EGBOCHI INYE ABANYE - WINDOWS - 2019
Ọrụ Ntanetị Onye Ọrụ Na-egbochi Inye Abanye
Ọ bụrụ na ị abanye na Windows 7, ị na-ahụ ozi na-ekwupụta na ọrụ Profaịlụ ọrụ na-egbochi onye ọrụ ahụ na-abanye, mgbe nke a na-abụkarị n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-eme mgbalị iji banye na profaịlụ onye ọrụ nwa oge ma ada ada. Hụkwa: Ịbanye na profaịlụ nwa oge na Windows 10, 8 na Windows 7.
Na ntụziaka a, m ga-akọwa usoro ndị ga - enyere aka dozie njehie ahụ "Enweghị ike ịkọ profaịlụ onye ọrụ" na Windows 7. Biko mara na a ga - agbazie ozi ahụ "Banyere na profaịlụ nwa oge" (mana enwere nuances nke a ga - akọwa na njedebe isiokwu).
Rịba ama: n'agbanyeghị na usoro mbụ akọwapụtara bụ isi, ana m atụ aro ka ịmalite nke abụọ, ọ dị mfe ma dị mfe iji nyere aka dozie nsogbu ahụ n'enweghị ihe ndị na-adịghị mkpa, nke, ọzọ, nwere ike ọ gaghị adị mfe maka onye ọrụ novice.
Njehie ezighi ezi site na iji ndekọ Editor
Iji dozie njehie nke ọrụ profaịlụ na Windows 7, nke mbụ ị ga-achọ ịbanye na ikike Njikwa. Ihe kachasị mfe maka nzube a bụ ịbịa kọmputa na ọnọdụ dị mma ma jiri akaụntụ nchịkwa ahụ wuru na Windows 7.
Mgbe nke ahụ gasịrị, malite nchịkọta akụkọ (pịa igodo Win + R na keyboard, banye na windo "Run" regedit ma pịa Tinye).
Na Editor Editor, gaa na mpaghara (nchekwa dị n'aka ekpe bụ mpaghara Windows ndekọ ngalaba) HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion ProfileList ma gbasaa mpaghara a.
Dee usoro ndị a iji wee:
Chọta na ProfaịlụList abụọ nke abụọ, malite site na ihe odide S-1-5 ma nwee ọtụtụ akara na aha ahụ, otu n'ime ha ga - akwụsị na .bak.
Họrọ nke ọ bụla n'ime ha ma debe ụkpụrụ dị n'aka nri: ọ bụrụ na uru ProfileImagePath na-ezo aka nchekwa profaịlụ gị na Windows 7, mgbe ahụ nke a bụ kpọmkwem ihe anyị na-achọ.
Right click na ngalaba na - enweghị .bak na njedebe, họrọ "Kpọgharia aha" ma gbakwunye ihe (ma ọ bụghị .bak) na njedebe nke aha ahụ. Na tiori, ọ ga-ekwe omume ihichapụ ngalaba a, mana agaghị m akwado ime ya tupu ị hụ na "Ọrụ profaịlụ na-egbochi ịbanye" njehie apụla.
Kpọgharia ngalaba nke aha ya nwere .bak na njedebe, naanị na nke a ka ihichapụ ".bak" nke mere na ọ bụ naanị aha ogologo oge ka na-enweghị "mgbatị".
Họrọ ngalaba nke aha ya ugbu a enweghị .bak na njedebe (site na nke 4), na n'akụkụ aka nri nke nchịkọta akụkọ, pịa uru RefCount na bọtịnụ òké aka - "Gbanwee". Tinye uru 0 (zero).
N'otu aka ahụ, setịpụ 0 maka otu ọnụahịa aha ya bụ State.
Emeela. Ugbu a, mechie edetu ndekọ, malitegharia kọmputa ma chọpụta ma ọ bụrụ na a gbazihiere mgbe ịbanye n'ime Windows: enweghi ike ịhụ ozi na ọrụ profaịlụ na-egbochi ihe.
Gbanwee nsogbu na mgbake usoro
Otu n'ime ụzọ dị mfe iji dozie njehie ahụ merenụ, nke, Otú ọ dị, anaghị arụ ọrụ mgbe niile, ọ bụ iji usoro Windows 7. iweghachị usoro. Usoro a bụ:
Mgbe ịgbanyere kọmputa, pịa igodo F8 (yana ịbanye n'ọnọdụ nchekwa).
Na nchịkọta nhọrọ nke na-egosi n'obere nwa, họrọ ihe mbụ - "Nchọpụta Kọmputa."
Na nhọrọ mgbake, họrọ "Weghachite System. Weghachite ọnọdụ Windows echekwara na mbụ."
Ọkachamara mgbake ga-amalite, pịa "Ihe na-esote", wee họrọ ebe weghachite site na ụbọchị (ya bụ, ị ga-ahọrọ ụbọchị mgbe kọmputa na-arụ ọrụ nke ọma).
Kwenye ngwa ngwa mgbake.
Mgbe mgbake ahụ zuru ezu, malitegharia kọmputa ahụ wee chọpụta ma ozi ahụ ọ pụtakwara na enwere nsogbu na nbanye na ọ gaghị ekwe omume ịkọ profaịlụ.
Ihe ngwọta ndị ọzọ nwere ike ịgwọ nsogbu ahụ na ọrụ profaịlụ Windows 7
Ụzọ ngwa ngwa na nke edebanyeghị edezi iji dozie njehie ahụ "Ọrụ Ntanetị Na - egbochi Logging In" - abanye na nchekwa dị mma site na iji akaụntụ nchịkwa arụnyere na ike onye ọrụ Windows 7 ọhụrụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, malitegharịa kọmputa, banye n'okpuru onye ahụ e kere ọhụrụ ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nyefee faịlụ na nchekwa site na "ochie" (si C: Users Username_).
Ọzọkwa na weebụsaịtị Microsoft nwere ntụziaka dị iche na ozi ndị ọzọ banyere njehie ahụ, yana ngwa Microsoft Fix It (nke na-ewepu onye ọrụ) maka mgbazi aka: //support.microsoft.com/ru-ru/kb/947215
Abanye na profaịlụ nwa oge.
Ozi na nbanye nke Windows 7 na profaịlụ onye ọrụ nwa oge nwere ike ịpụta na n'ihi mgbanwe ọ bụla ị (ma ọ bụ usoro nke atọ) mere na ntọala profaịlụ ugbu a, a merụrụ ya.
N'ozuzu, iji dozie nsogbu ahụ, ọ ga-ezuru iji ụzọ mbụ ma ọ bụ nke abụọ site na ntuziaka a, Otú ọ dị, na ngalaba Profaịlụ na ndekọ ahụ, na nke a, enwere ike ịnweghị ihe abụọ yiri nke ahụ na .bak na enweghị nkwụsị dị otú ahụ maka onye ọrụ nke ugbu a (ọ ga-abụ naanị .bak).
N'okwu a, kpochapụ mpaghara ahụ nke S-1-5, nọmba na .bak (pịa aka nri na aha ngalaba - ihichapụ). Mgbe nhichapụ, malitegharia kọmputa ma banye ọzọ: oge ​​a ozi banyere profaịlụ nwa oge ekwesịghị igosi.